INTERNET SPEED ကိုမြှင့်မယ့် INTERNET CYCLONE 2.17+KEYGEN | ကိုလတ်(ကျွဲဆင်း)နည်းပညာစု့စည်းမှု့
IDM နှင့် ပါက်သက်သမျှ
IPHONE နှင့် Jailbrake
Android နှင့် မြန်မာဖောင့်
Android နှင့် ROOT
INTERNET SPEED ကိုမြှင့်မယ့် INTERNET CYCLONE 2.17+KEYGEN
Leaveareply	Internet Cyclone 2.17+Keygen
အညွှန်းမှာရေးထားတာတော့ အင်တာနက် speed ကို 200 % အထိမြှင့်ပေးတယ်
ဆိုပဲ..ဟီးဟီး…ဒါပေမယ့် နဂို ရှိမှ နဂိုင်း ထွက်မှာလေ နော
သူ့ ကိုတော့ လူတော်တော် များများလည်း သိကြပါတယ် ဒါလေးက update လေးပါ
windows 95 ကနေပြီးတော့ windows 8 အထိ အသုံးပြု့လို့ရပါတယ်
Internet Cyclone ကို သုံးထားမယ် ဆိုရင် youtube လိုနေရာကနေ video ကြည့်ထဲ့ အခါ
ဖိုင်တွေ ဒေါင်းတဲ့ အခါ online game တွေ ကစားတဲ့ အခါတွေမှာ အထစ်အငေါ့ မရှိ
ကြည့်နိူင်ဒေါင်းနိူင် ကစားနိူင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်
simcard ထည့်ပြီးတော့ သုံးရတဲ့ moden တွေတောင်မှ ဆွဲနိူင်ပါတယ်
ကြိုးတွေ သုံးတဲ့ အင်တာနက်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့
သူ့ကို Keygen လေးနဲ့ Fullversion ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါ
MEDIAFIRE | ZIPPYSHARE | SHAREBEAST | BOX
ကျနော် စက်မှာလည်း အခု့ စမ်းရင်း သုံးလိုက်တာ တော်တော်လေးတိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်ဗျ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့လည်း သုံးနိူင်အောင်ပြန်မျှလိုက်ပါတယ် အောက်မှာ keygen အသုံးပြု့နည်းလေး ကိုပုံနှင့်တကွ ပြထားပေးပါတယ် လုပ်ကြည့်ပါနော်
အရင်ဆုံး မိမိ အသုံးပြု့မယ် Internet Cyclone ကို run ပေးဖို့ set.exe ဆိုတာလေး ကိုနှိပ်ပေးပါ install လုပ်တက်မယ် ထင်ပါတယ် ဒါကြောင့် ပုံနဲ့မပြတော့ဘူးနော်
အောက်ကပုံအတိုင်းဝယ်ဖို့ သတိပေးလိမ့်မယ် အဲလိုဆိုရင် continue ကိုနှိပ်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ပါ
install လို့ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် run လိုက်ပါ ဘားအပေါ်လေးမှာ UNGISTERED ဆိုတဲ့ စာလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆို ဖူး မဖြစ်သေးလို့ပါ အောက်က ပုံ အတိုင်းပေါ့Help ဆိုတာ ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Register ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးတော့ ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်လေး ထဲက Keygen.exe ဆိုတာကို ကလစ် ၂ ချက်ခေါက်လိုက်ပါအောက်က ပုံအတိုင်း Name နေရာမှာ မိမိ နာမည်ထည့်ပေါ့ serial ဆိုတာ ကတော့သူက အော်တိုပေးတာပါ နာမည်လေး နဲ့ Serial လေး ကို copy ကူးယူလိုက်ပါ
ကူးလာတဲ့ နာမည် နဲ့ Serial လေးကို အခု့နက ဖွင့်ထားတဲ့ Registered ဆိုတဲ့နေရာမှာ သွားဖြည့်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် OK နှိပ်လိုက် အောက်က ပုံအတိုင်းထွက်လာမယ်OK ထပ်ပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် လုံးဝ ဖူးဗျားရှင်းဖြစ်သွားပါပြီ ခင်ဗျာအောက်မှာဆက်ကြည့်ပါ
ကျနော် နာမည် နဲ့ လိုင်စင်တခု့ ပေးလိုက်ပါပြီ ခင်ဗျာအာဒါ ဆိုရင် Keygen ဖြင့် Fullversion ဖြစ်အောင် လုပ်တာလေးက အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါတယ် ခင်ဗျာOK အားလုံးပြီးသွားပြီ ဆိုရင် စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါပြန်တက်လာတဲ့ အခါမှာ Internet Cyclone လေး ကိုဖွင့်ပြီးတော့ မိမိ အသုံးပြု့တဲ့ ကွန်နက်ရှင်ပေါ် မူတည်ပြီးတော့ အသုံးပြု့လို့ရပါပြီအားလုံး အဆင်ပြေပြီး အင်တာနက် လိုင်းကောင်းကောင်း ရပါစေ ခင်ဗျာကိုလတ်(ကျွဲဆင်း)
မျှဝေပေးပါFacebookTwitterGoogleLike this:Like Loading...	This entry was posted in Speed Up Internet on August 4, 2013 by aungzaylatt.	Post navigation
← CD,VCD,DVD တွေကို သူများ ကော်ပီ မကူးနိူင်အောင် ကာကွယ်ကြမယ်
ပြည်ပဖုန်းခေါ်ဆိုသော MEB Talk2 ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်များစတင်ဝယ်ယူနိုင် →
Facebook မှာလည်း LIKE လို့ရပါတယ်	Facebook မှာလည်း LIKE လို့ရပါတယ်
နောက်ဆုံးတင်ထားပြီးသော	Internet Explorer 11.0 Free Download
ပြည်ပဖုန်းခေါ်ဆိုသော MEB Talk2 ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်များစတင်ဝယ်ယူနိုင်
CD,VCD,DVD တွေကို သူများ ကော်ပီ မကူးနိူင်အောင် ကာကွယ်ကြမယ်
ကွန်ပြူတာတွေ တလုံးနဲ့ တလုံး ချိပ်ဆက်မယ့်Teamviewer Premium